🥇 ▷ Abuurista Ceelasha ayaa hadda laga heli karaa Xbox Game Pass ✅
Abuurista Ceelasha ayaa hadda laga heli karaa Xbox Game Pass
Laga bilaabo maanta waxaan horeyba ugu raaxeysan karnaa Abuuritaanka Intii wanaagsan Mahad Xbox Game Pass. Cinwaanka asalka ah ee ay diyaariyeen Studioska Duulista hawada ayaa ah kii ugu dambeeyay ee ku biira liis dheer oo ciyaar ah oo lagu soo daray liiska diiwaangelinta adeegga Microsoft ee la heli karo isla maalinta la siidaayay.
Abuurista Well Well waxay ka mid ahayd kuwa loo xushay inay qayb ka noqdaan kooxda weyn ee koobab cusub oo imaan doona inta lagu jiro bishaan Sebtember buugga ‘Xbox Game Pass’, oo ah bil aan ku ciyaari karno dahabka saxda ah sida Gears 5 ama Iron Gear. Adag 2 & 3 HD. In kasta oo Abuurista Ceelasha ay aad uga fog yihiin kuwan xannibaadaha AAA, waxaan si adag kuugula talinaynaa inaad tijaabiso, maadaama soo jeedinteeda asalka ah aysan cidna uga tagaynin cidna.
Abuurista Ceelasha, isku-darka noocyo kala duwan oo leh natiijo weyn
Abuurista Well Well waa ciyaar iskudarta noocyada kaladuwan ee caanka ka ah adduunka ee videogames-ka laakiin weligeen malahanyaynin inaan isla wada jirno, oo tanina waa wixii ay naga soo jeedinayaan Studio Studio, cinwaan labada dhinac a khalad a godka dagan iyo a baastoolad potpourri noocyada hiddaha oo isku dayay inay isku daraan wax ka badan xaq uun.
Abuurista Ceelasha dhexdeeda waxaan u ciyaari doonnaa sidii Injineer Robot ah, noociisa ugu dambeeya. Hadafkayagu wuxuu noqon doonaa inaan xoraynno magaalo ay ku dheceen duufaan weligeed ah; taas oo ah inaan ku hawlgalno mashiin duug ah oo awood u leh inuu beddelo cimilo naafo ah qarniyo dartiis xayawaanka weyn ee ilaaliya godka ay ku yaal. Waa inaan ka gudubnaa godad-galka kaladuwan ee xallinta xujooyinka kala duwan ee aan helno ka faa’iideysiga mashruucyadeena waxkastoo suurtagal ah. Si tan loo sameeyo, waxaan yeelan doonnaa “hub” kala duwan oo na siin doona xirfado kaladuwan, sida awood u yeelashada in aan bilowno dhowr mashruuc ama waqti gaabis ah.
Hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato kulankaan xiisaha badan, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso falanqeynta lagu sameeyay Generation Xbox ee uu sameyay saaxiibkeena Alberto. Waxaad ka heli kartaa falanqaynta buuxda ka soo xiriirinta soo socota. Abuurista Ceelasha ayaa hadda laga heli karaa Xbox Game Pass labada Xbox One iyo PC.